EyeKhala 15, 2018 admin
Price ogcwele: Umda inzuzo Great Week Solid
IiCawa basoloko iintsuku umdla kushishino cryptocurrency le. Nangona kukho ngokuqhelekileyo kukho uxinzelelo elibi kakhulu market, kule Cawe ujika kwahluka kakhulu. Ixabiso Ndisezinkwenkwezini iyaqhubeka kukomeleza njengoko iqhubeka a uptrend iveki yonke ngaphandle kweziphazamiso ezininzi kakhulu.
Iincopho Price ogcwele phezu $ 0.215
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaye kwacaca ukuba lo ixabiso ogcwele waba phezu bayibambe. Emva xesha lifutshane ezinzileyo umfutho phezulu, ixabiso Ndisezinkwenkwezini ukukhanya kakhulu kwi $ 0.18. Le meko iye yaqhubeka ukususela, kunye XLM nangoku ndibathuma. Nge ngexabiso ekhoyo $ 0.217, kubonakala kuhle le asset.
Kule yokugqibela 24 iiyure kwakukho omnye 9.4% ukwanda kwamanani ogcwele. Oku okumangalisayo ngokwayo, nangona ikakhulu iqhutywa Bitcoin ixabiso mikhwa emihle. Ukuba Bitcoin walahlekelwa ixabiso, bambalwa kakhulu zemali ibiya ngempumelelo bona ixabiso, kodwa Ndisezinkwenkwezini okuhle ngokwayo. Ukuba le zinga ubamba, ke akunakwenzeka ukuba ixabiso Ndisezinkwenkwezini of $ 0.25 Kulindeleke kwiintsuku ezimbalwa.
Njengoko kunokulindeleka ngokwezi kweli futhe ixabiso nomzuzwana, imeko yangoku lula nokwanda XLM / ukwahlukana BTC. Le imajini yorhwebo unyukileyo waya yi 7.14% kule yokugqibela 24 iiyure, into ke leyo exela ukuba imfuno ukuthenga nokuthengisa XLM kwanda okwangoku. Nokuba le meko ixesha elide nezizinzileyo okanye hayi kunzima kakhulu ukuqikelela ngeli xesha.
ixabiso iyaqhubeka HIV Ndisezinkwenkwezini kukuba nangona urhwebo umthamo ophantsi kakhulu jikelele. Nakuba a $ 47.58 million volume yayingathethi kuthetha olubi, kuya lutho kuthelekiswa noko nokulindeleyo kunikwa i umfutho yangoku Ndisezinkwenkwezini. kunjalo, kuba ngaphezu eyaneleyo ukugcina lo mkhwa, nokuba le meko wayengenakuyijika phezu kwiintsuku ezimbalwa ezizayo.
Ngokufanayo ekuqaleni kule veki, Binance isesona umthamo sorhwebo. BTC and USDT lakhe ngababini nokungenisa phezu 38.7% yonke imisebenzi. pair CKUSD BCEX kaThixo yesithathu, elandelwa izibini ezimbini CoinEgg and BCEX BTC. Zonke ezi marike umdla kakhulu umfutho XLM yangoku, nakuba ingenziwa eninzi eyinkunzi entsha iza emalikeni.
Enoba ixabiso Ndisezinkwenkwezini baqhubeke kuvuka ngumbandela eyahlukileyo ngokupheleleyo. IiCawe iintsuku ezahlukeneyo kakhulu xa kuthelekiswa nezinye lweveki njengoko lumelo oluchanekileyo luvo lwe-cryptocurrency abayi. Xa izinto zibuyele esiqhelweni ngoMvulo, imeko ye XLM kunye nazo zonke ezinye iimarike engafani kakhulu.
Ingxelo Daily Market Kraken for 14.07.2018
$44.4M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Blockchain News 9 EyoMqungu 2018
Hey Daily Team Altcoin! Let&...
Post Previous:Blockchain News 13.07.2018